कामका लागी बिदेश आउँदा र आईसकेपछी देखीने समस्या र उपायहरु यस्ता छन ! जानी राख्नुस - Kailash Post
कामका लागी बिदेश आउँदा र आईसकेपछी देखीने समस्या र उपायहरु यस्ता छन ! जानी राख्नुस
कामदारका रूपमा विदेश आइसकेपछि सुरुमा देखिने विभिन्न समस्या छन्, जस्तो : भाषाको समस्या, सम्बन्धित देशको कानुनी व्यवस्थाको जानकारी नहुनु, नेपाली राजदूतावाससँग समन्वयको अभाव, हावापानी नमिल्दा बिरामी हुने, काम नजान्दा अनावश्यक दुःख पाउने आदि ।
म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्टसम्बन्धी जानकारी
तपाईं कुन म्यानपावरबाट विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? उक्त म्यानपावर र एजेन्टका बारेमा जानकारी लिनुहोस् तथा आफ्नो परिवारलाई सम्पूर्ण जानकारी गराउनुहोस् । म्यानपावर कम्पनी दर्ता, नवीकरण, कर बुझाउने, उसले अहिलेसम्म पठाएको कामदारका बारेमा सामान्य जानकारी, म्यानपावरको म्यानेजरको नाम, ठेगाना सम्पर्क नम्बर, आफूलाई म्यानपावरसम्म पुर्‍याउने व्यक्ति, जसलाई एजेन्ट भनिन्छ, उसको पनि पूरै जानकारी लिनुहोस् र परिवारमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुहोस् ।
आफू जाने देशका बारेमा जानकारी
आफू जुन देश जाँदै हुनुहुन्छ त्यस देशका बारेमा जानकारी लिनुहोस्, भौगोलिक अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था, आफू रहने ठाउँ आदि ।
कामका बारेमा जानकारी
आफू जुन काममा जाने हो उक्त कामका बारेमा पूर्ण जानकार हुन जरुरी छ । यदि छैन भने केही समय लगाएर काम सिक्नुहोस् ।
आफू जुन कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसका बारेमा अनिवार्य जानकारी लिनुहोस् । अहिले जुनसुकै कम्पनीको पनि वेबसाइट हुन्छ, त्यसलाई चेक गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर नजिकका कुनै आफन्त उक्त कम्पनीमा अर्थात् त्यो देशमा हुनुहुन्छ भने सोधपुछ गरेर पनि जानकारी लिन सकिन्छ । अनलाइनबाट भिसा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ । तलबका बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ र त्यसको सहमति पत्र अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ ।
आफू जुन देशमा जाने हो त्यो देशको भाषाको सामान्य ज्ञान जरुरी छ, त्यसका लागि केही समय भाषा सिक्नु राम्रो हुन्छ ।
नेपाली राजदुतावाससम्बन्धी जानकारी
जुन देशमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो देशको कानुनका बारेमा जानकारी लिनुहोस् ।
श्रम र बिमा
जुन देशमा गए पनि श्रम र बिमा अनिवार्य नै हुन्छ । श्रम र बिमा गरिसकेपछि पासपोर्ट आदि कागजातको प्रतिलिपि परिवारमा पनि दिन बिर्सनु हुँदैन ।
म्यानपावरमा जति पैसा बुझाइन्छ, त्यसको रसिद अनिवार्य लिनुपर्छ । कागजात पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्छ । उडान भर्नुअघि सबै चेक गर्नुहोस् । कुनै पनि कुरा नभुल्नु होस् । (जस्तै— पासपोर्ट, भिसा पेपर, बिमा पेपर, श्रम स्वीकृति, म्यानपावरले दिएको सहमति पत्र आदि ।) उडानभन्दा अघि परिवारमा उडान नम्बर, विमान कम्पनीको नाम, उड्ने समय तथा अवतरण हुने समय जानकारी गराउनुहोस् ।
सबन्धित देशको विमानस्थलमा अवतरण भैसकेपछि प्रहरी चेकिङमा सहयोग गर्नुहोस् । कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति नआएसम्म कसैलाई पासपोर्ट नदिनुहोस् । आधिकारिक व्यक्ति तपाईंको नामको कार्ड बोकेर उभिएको हुन सक्छ अर्थात् कुनै न कुनै आइडी लिएर बसेको हुन सक्छ ।
सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्, पुराना साथीहरूभए चिनजान गर्नुहोस्, नजिकिनुहोस् ।
राजदूतवासमा जानकारी गराउनुहोस् । आफ्ना बारेमा जानकारी, कम्पनीको नाम, आफ्नो काम, सहमति भएको तलब, कम्पनीको मालिकको नाम नभए पनि फोन नम्बर अनिवार्य टिपाउनुहोस्, साथै परिवारमा पनि त्यसको जानकारी दिनुहोस् ।
काम गर्न कन्जुस्याइँ नगर्नुहोस्, लाज धक नमानी काम गर्नुहोस् ।
समयमा खाना खाने, समयमा सुत्ने बानी बसाउनुहोस् । विदेशमा बाटो क्रस गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस् ।
परिवारमा कम्पनीका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीसहित आफूले काम गर्ने दिन, छुट्टी हुने दिन, खाना खाने–सुत्ने आदि समयका बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् ।
जुन देशमा हुनुहुन्छ, त्यो देशको कानुनविपरीत कुनै पनि काम नगर्नुहोस् ।
आफू कामदारका रूपमा आएको देशमा भएका नेपाली संघसंस्था, गैरआवासीय नेपाली संघ आदिसँग नजिक रहनुहोस् । दुःख–सुखको कुरा साथीभाइहरूसँग सेयर गरिरहनुहोस्, जसले गर्दा तपाईंलाई परेको पीडा केही हदसम्म कम हुन्छ ।
कम्पनी छाडेर कहिल्यै नभाग्नुहोस्, समस्या आएलगत्तै नेपाली संघ–संस्था, नेपाली दूतावास जहाँ सजिलो हुन्छ सम्पर्क गर्नुहोस् तर कम्पनी नछाड्नुहोस् ।
यतिसम्म गरियो भने परदेशी जीवनमा आइपर्ने जोखिम केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ र आफू पनि जोगिन सकिन्छ ।
बिप्लव समुहले गरेको घोषणा बिफल , सनीवारको बन्द फीर्ता
अमेरीकामा प्रचण्डलाई यती सम्म गरेछन , उनले यस्तो गर्लान भन्ने सोचेकै थीएनन् ( भीडीयो सहीत )